Iitattoo zesizwe engalweni | Ukuzoba
Iitattoo zesizwe engalweni yakhe
USusana godoy | | Iitattoos zivuliwe, IiTattoos engalweni
Kukho abo bacinga ukuba iiTattoos zesizwe ziitattoo eziphelelwe lixesha, kodwa akukho nto iqhubeka kwinyani. Abantu besizwe basathanda abantu abaninzi kwaye iifashoni zizihlobo kakhulu kuba uyilo lwe tattoo abanye abantu banokuyeka ukuthanda abanye, nangona kunjalo, Basenokuba zezona zoyilo zinomtsalane emzimbeni.
Iitattoo zesizwe engalweni luhlobo lwe tattoo oluhlala luphathwa ngamadoda, kodwa abasetyhini banokuyiphatha xa bethanda. Kumcimbi wokungcamla akukho nto ibhaliweyo kwaye into ebalulekileyo kukuba umntu ofumana itattoo yesizwe engalweni yakhe uziva ekhululekile ngetattoo yakhe.
Ezi zesizwe nazo zinokuba zihle kakhulu kwaye zinobuhle ukuba zenziwe ngomgca olungileyo. Iitattoo zesizwe zinembali eninzi kwaye abantu abaninzi banolu hlobo lwe tattoo kwiinkulungwane ezidlulileyo. Kungenxa yoko le nto, ukuza kuthi ga ngoku, besafunwa kakhulu ngabantu, kokubini amadoda nabafazi bayo nayiphi na inkcubeko okanye inxalenye yehlabathi.
Zininzi iindlela onokuzifumana kwaye ziya kuxhomekeka kukhetho lwakho ukuba ukhetha enye okanye enye. Ukuba uthanda uyilo ungayilungelelanisa nomzimba wakho ukuze ilunge kakuhle. Iitattoo zesizwe engalweni lukhetho olufanelekileyo kwaye unokukhetha indawo yengalo oyithandayo. Kukho nabo bathanda umvambo kwisizwe esikwisongo ukuze sihambelane kakuhle nengalo. Khetha uyilo oluthanda kakhulu emva koko ukhethe umculi we tattoo omthandayo kwaye uyazi ukuba isitayile sakhe silungele ukuthanda kwakho. Umvambo wesizwe engalweni, ukuba uthanda ubuhlanga kunye nemvelaphi yabo, iya kuba yimpumelelo kakhulu.
1 Iindidi zeetattoos zesizwe ngengalo
1.1 Iidragons zesizwe
1.2 Iingonyama zesizwe
1.3 Imixokelelwane yesizwe
1.4 Isizwe sasemayan
Iindidi zeetattoos zesizwe ngengalo
Njengoko sisazi kakuhle, ukuba kukho esinye sezidalwa ezikhoyo Inxalenye yefantasy kunye neentsomi, ezi ziidragons. Sibonile ngeendlela ezininzi, ngakumbi kwiscreen esincinci okanye esikhulu. Kodwa ngoku badlula kulusu lwethu ngohlobo lweetattoos zesizwe. Zininzi iintsingiselo ezinikezelwe kubo, kuba kuxhomekeke kwinkcubeko.
Kweminye yayifana nabadali okanye abakhuseli, kodwa kwabanye, ubudlelwane babo babusondele ekufeni. Ewe xa sithetha nge iiTattoos zedrokh, sinokuyihlengahlengisa kwiintsingiselo esizithanda kakhulu kunye nobungakanani obufunayo, kuxhomekeke kwinxalenye yomzimba apho siza kuwusa khona. Izinketho zininzi kwaye zahlukahlukene. Kodwa bonke bahlala benophawu lokuhlala belawula.
Kungathini ukuba kungaphantsi, ingonyama yenye yezona zilwanyana zinamandla. Yiyo loo nto bembeke njengokumkani wehlathi. Kuqhelekile ukuba inxulunyaniswe namandla okanye isibindi kunye namandla. Inkqubo ye- iiTattoo zesizwe zikwenza ukumelwa kwazo zonke ezi mpawu zinxulunyaniswe nelizwe lokomoya ngakumbi. Ke ngoko, kufuneka sihlale sikhumbula imigca kunye neemilo eziza kutyumba isilwanyana esifana nesi. Unokukhetha ukunxiba kuphela ubuso bakho okanye umzimba opheleleyo ngobuhle obukhulu kulusu lwakho.
Ngenye yeendlela ezikhethiweyo xa sithetha ngazo Iitattoo zesizwe. Imixokelelwane inokuhombisa amalungu ahlukeneyo omzimba kodwa onke, iingalo zizintandokazi zakhe. Iindlela ezithile zingene ngaphakathi kwaye ngamanye amaxesha ziye zibukeke njengameva, ke intsingiselo yazo iya kuhlala ihluka apho. Kuyinyani ukuba njengomthetho ngokubanzi, amatyathanga ayafana nokuba phantsi kwengcinezelo ethile. Kodwa nokuba sinokuthi siyinike intsingiselo efanelekileyo nganye nganye. Kuba izizwe azinazo ezigqityiweyo njengoko zivaliwe njengeetyathanga ezisisiseko. Ngesi sizathu, inkululeko kunye neenkolelo zezona zimhlaselayo.
AmaMeya ayenxibe iitatoo ezininzi nganye kuzo yayinentsingiselo entsha. Iimpawu zayo zihlala iminyaka emininzi ngakumbi yiyo loo nto isithethe sigcinwa namhlanje. Zombini ukhuseleko kunye neenkolelo zokomoya yayiyeyona ntsingiselo ibalulekileyo yeetattoos zakhe. Izilwanyana okanye umhlaba kunye nelanga nazo zavela phakathi kwazo. Ukuchuma kunye notshintsho nazo iisimboli ezivela kubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitattoos zivuliwe » Iitattoo zesizwe engalweni yakhe
UJuan Challco Lenes sitsho
Inomdla kuzo zonke ii-tataujes
Phendula kuJuan Challco Lenes
Iitatto ezintle kubasetyhini nakumadoda: umbuzo wesini?
Iitattoos ngesiJapan, funda ukwahlula